Puntland: Weeraradii Maka Almukarrama Iyo Xabsiga Boosaaso Wey Isku Xirnaayeen * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe, November 9, 2013: Maamulka Puntland ayaa ku eedeeyey weerarkii xalay lagu qaaday Xabsiga magaalada Bossaso inay ka danbeeyeen Al-shabab ee ku dhuumaaleysanaya buuraleyda Galgala, dhowr jeerna dagaal kula galay halkaas ciidamada Puntland.
Wasiir ku xigeenka Wasaarada Amniga Puntland Gen. Cabdicasiis Siciid Gacmeey oo maanta shir jaraa,iid ku qabtey Garowe wayaa sheegey in ku dhawaad 40 dagaalyahan oo ka tirsan Ururka Al-shabab ay weerarka soo qaadeen, kuwaas oo uu sheegey in ciidanka Ilaalada xabsigu iska difaaceen weerarkii uga yimid habeenimadii xalay islamarkaana laga qabtey saanad isugu jirta hub iyo rasaas.
Gen. Cabdicasiis Siciid waxa uu sheegey khasaaraha ka dhashey weerarka xabsiga inuu isugu jiro dhimashada hal sarkaal iyo dhaawaca labo askari, kuwaas oo hadda lagu daweynayo isbitaal ku yaala Bosaso.
Gen Gacmeey waxa uu intaas ku darey in ciidamo ka tirsan kuwa amaanka Puntland ay ku dabo joogaan raadka kooxdii xalay xabsiga weerartey oo sida uu sheegey Wasiirku u baxsadeen dhanka buuraleyda Calmadow ee Bossaso kaga beegan koonfurta.
Wasiir ku xigeenka Amniga Puntland waxa uu tilmaamay in qaraxii xalay ka dhacay Hotel Maka al-mukurama ee magaalada Muqdisho iyo weerarkii xalay ee magaalada Bossaso ay ahaayeen kuwo isku xiriirsan oo ay soo maleegeen Al-shabab.
Xalay ayaaa dabley hubeysan ayaa xalay weerar ku qaaday xabsiga magaalada Booasso, halkaasoo ay doonayeen iney kala baxaan maxaabiis, waxaana kooxdaasi dileen labo ka mid ah ciidamada ilaalada xabsiga oo uu ku jiray sarkaal taliye ku xigeen xabsiga ka ahaa.